Wasaarada Gaashaandhiga ee Muqdisho oo caawa weerar lagu qaaday iyo khasaaro jiro….. – Balcad.com Teyteyleey
Wasaarada Gaashaandhiga ee Muqdisho oo caawa weerar lagu qaaday iyo khasaaro jiro…..
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegayaa in caawa qaraxyo iyo rasaas lagu weeraray xarunta Wasaarada Gaashaandhiga ee magaalada Muqdisho, waxaana daqiiqado laga maqlay aaga Wasaarada rasaas xoogan.
Dad ku sugan agagaarka xarunta Wasaarada Gaashaandhiga ayaa sheegay in rag hubeesan sabano iyo rasaas ku weerareen caawa fiidkii xarunta Wasaarada Gaashanadhiga, waxaana rasaas culus ku jawaabay ciidanka Milatariga ee ku suganaa xarunta la weeraray
Ciidamo kale oo katirsan Nabadsugida ayaa la sheegay in ay eryadeen ragii weerarkaasi ku qaaday Wasaarada Gaashaandhiga, lamana oga ilaa hada in ciidamada amaanka gacana ku dhigeen xubno kamid ah ragii weerarka ka dambeeyay.
Inta la xaqiijiyay hal qof oo shacab ah ayaa lagu soo waramayaa in uu ku dhintay rasaas ka dhacday agagaarka xarunta Wasaarada Gaashaandhiga, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay labo qof oo kale oo shacab ah kuwaa oo loola cararay xarumaha caafimaadka.
Laamaha amaanka dowlada Soomaaliya ayaan wali ka hadlin weerarkan khasaaraha geestay ee caawa lagu qaaday xarunta Wasaarada Gaashaandhiga, waxaana hada degan xaalada aaga uu dagaalku ka dhacay oo saacado xaalad cakirnaan ah ay ka jirtay.
The post Wasaarada Gaashaandhiga ee Muqdisho oo caawa weerar lagu qaaday iyo khasaaro jiro….. appeared first on Ilwareed Online.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Macron-ka Cusub Oo Dil Ka Badbaadey